Shabakadda Amiirnuur – Page 78
Tallaabo aan horay loo arag oo ka dhan ah muslimiinta ayay ku dhaqaaqday mid kamida dowladaha dhaca galbeedka qaaradda Afrika, dowladda Ghana ayaa soo saartay war faragelinaya muqadasaadka muslimiinta. Dowladda Ghana ayaa sheegtay in codbaahiyaasha masaajidda ay buuq ku yihiin caasimadda Accra sidaas daraadeed ay soo jeedinayso in lajoojiyo Aadaanka […]
Qarax Ka dhacay Xuduud beenaadka Itoobiya iyo Kenya.
Warar aanu heleyno ayaa xaqiijinaya in qarax weyn uu ka dhacay deegaan kamid ah magaalooyinka ku jira gacanta Xabashida Itoobiya, soona xigta dhanka Kenya. Qaraxa ayaa ka dhacay deegaanka Mooyaale oo dhaca xuduud beenaadka dalalka Itoobiya iyo Kenya, waxaana ka dhashey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Ugu yaraan 3 […]
Bisha Shacbaan Muxuu Sameyn Jiray Nabigeena صلي الله عليه وسلم (Dhageyso)
Bisha Shacbaan, caawa waa labo, waxaana rajeeneynaa in uu Allaah ina gaarsiiyo bisha Ramadaan, islamarkaana inaga dhigo kuwii ka faa’iideystay insha’allah. Nabigeena Muxamad صلي الله عليه وسلم bishan oo kale wuxuu sameyn jiray acmaal badan oo uu Soonku, kamid yahay isagoo sidoo kale u diyaar garoobi jiray bisha barakeysan ee Ramadaan. […]
« Previous 1 … 76 77 78 79 80 … 123 Next »